काठमाडौंमा झन्डै १४ हजार भोट ल्याएका सुमन सायमिले भने- बालेनले मिलेर काम गरौं भनेका छन् :: सबिना श्रेष्ठ :: Setopati
बालेनको विजय जुलुसमा सँगसँगै हिँडेका सायमि
शुक्रबार काठमाडौंमा निस्केको विजय जुलुसमा नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह र चौथो स्थानमा रहेका सुमन सायमि। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहलाई बधाई र शुभकामना दिन उनका एक प्रतिद्वन्द्वी सुमन सायमि शुक्रबार बिहानै सभागृह पुगेका थिए।
काठमाडौंको नेवा भाषा, संस्कृति र यहाँका रैथानेहरूको भूमि संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका सायमि मेयरका एक स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्। उनी आँखीझ्याल (तिकिझ्याः) चिह्न लिएर उठेका थिए। उनले १३ हजार ७ सय ७० मत ल्याए।
आफूसँगै प्रतिस्पर्धामा सामेल सायमि शुभकामना दिन आएपछि बालेनले आफ्नो विजय जुलुसमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै भने, 'हामी दुवै स्वतन्त्र उम्मेदवार। तपाईं र मेरो उद्देश्य पनि एउटै। आउनुस् विजय जुलुसमा सँगै हिँडौं।'
सायमि एकछिन अलमलमा परे।
उनी सभागृह जानुको अर्को कारण पनि थियो। चुनावमा कुन ठाउँबाट आफूलाई कति मत आयो भन्ने विस्तृत विवरण लिन उनी त्यहाँ पुगेका थिए। बालेनले आग्रह गरेपछि नाइँ भनेनन्। बालेनसँगै गाडीमा चढेर उनको विजय जुलुसमा सहभागी हुँदै सहर परिक्रमा गरे।
यसरी मेयरका विजयी र पराजित उम्मेदवार एउटै गाडीमा सँगसँगै सवार तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। धेरैले बालेन र सायमिको सौहार्द सम्बन्धको तारिफ गरे। कतिपयले काठमाडौंलाई राम्ररी चिनेका र यहाँको स्थानीय मुद्दा उठाउँदै आएका सायमिसँग बालेनले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय पनि दिए।
विजय यात्रा क्रममा सायमिले पनि बालेनले जस्तै शिरमा भादगाउँले टोपी र घाँटीमा माला लगाएका थिए। माला बालेनले नै लगाइदिएको सायमि बताउँछन्। टोपी भने दुवैलाई अर्को साथीले लगाइदिएका थिए।
'तिमीहरू दुवै टोपी लगाऊ भनेर एक जनाले दिनुभयो। मैले कहिल्यै टोपी लगाएको थिइनँ। सुहाउँदैन जस्तो लाग्थ्यो। तर सम्मान गरेर लगाइदिएको कुरा नाइँ भन्न सकिनँ,' उनले भने, 'चुनाव बेला हामी प्रतिस्पर्धी भए पनि बालेन अब जनमतले पारित गरेका जनताका प्रतिनिधि हुन्।'
आफूले नजिते पनि आफ्नो जस्तै उद्देश्य र मुद्दा भएको मान्छेले जित्दा खुसी भएको सायमि बताउँछन्।
'हामी राम्रो कामका लागि हिँडेको मान्छे, राम्रो काम गर्नेलाई सधैं साथ दिन्छौं। नराम्रो गर्‍यो भने ऊविरूद्ध उभिन र छुट्टिन पनि सक्छौं,' उनले भने।
बालेन शाह स्वतन्त्रबाट उठ्दा धेरैले उनलाई ठूला दलको भोट काट्न आएको भनेका थिए। त्यस बेला उनले जवाफ दिएका थिए, 'हो म भोट काट्न आएको हो। कांग्रेस र एमाले दुवैको भोट काट्न आएको। जित्न आएको हो।'
सुरूदेखि अग्रता लिँदै आएका बालेन बिहीबार ६१ हजार ७ सय ३७ मतसहित मेयरमा निर्वाचित भए। सायमि भने चौथो भए। उनले सदर मतको ८.६१ प्रतिशत पाए। दस प्रतिशत नपुगेकाले उनको जमानत जफत भयो।
सायमिले बालेनले जसरी भोट काट्न आएको भनेका थिएनन्। तर काठमाडौंको भित्री क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसको भोट बालेनले भन्दा बढी सायमिले काटे।
यसरी बालेनले सँगसँगै जुलुसमा हिँडाएका र काठमाडौंको भित्री बस्तीले पत्याएका सुमन सायमि को हुन्?
सायमि कालिमाटीका चर्चित वामपन्थी नेता जीवनराम मानन्धरका छोरा हुन्। कालिमाटीमै उनीहरूको पुरानो मिठाइ पसल र होलसेल पसल छ। वडा नम्बर १३ का बासिन्दामा 'जीवनदाइको मिठाइ' भनेपछि नाम नसुन्ने कमै छन्। सायमिले आफ्नो बाबुबाट राजनीतिमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने देखेका र बुझेका थिए। त्यही भएर उनमा राजनीतिभन्दा व्यापारतिरै बढ्ता लगाव थियो।
एकदिन यस्तो आयो, उनी नचाहेर पनि भूमि अतिक्रमणको मुद्दा उठाउँदै सडकमा आउन बाध्य भए। उनको जिन्दगीको यो 'टर्निङ प्वाइन्ट' सात वर्षअघि आएको थियो, जब कालिमाटीका घरहरूमा डोजर चलाएर सडक विस्तार गर्न खोजियो। उनको आफ्नै घर पनि त्यसमा पर्थ्यो।
यसरी थातथलो नै उजाडिने भएपछि सायमि जुर्मुराए।
नरम र गुलियो मिठाइ बेच्दै आएका उनी नेवाः भूमि अतिक्रमणको विरोधमा चर्को र खस्रो नारा लगाउँदै सडकमा आए। उनी काठमाडौं उपत्यकाभरि जहाँ जहाँ सडक विस्तारले मान्छेको उठिबास हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ पुग्न थाले। राज्यले अन्यायमा पारेका स्थानीय नेवाःहरूलाई आफ्नो भावनात्मक र संघर्षको आडभर दिए। कहीँ उनीहरूसँगै आन्दोलनमा होमिए, कहीँ उनीहरूलाई संगठित गरेर आन्दोलन गर्न सघाए।
काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेवाःहरूलाई विकासका नाममा पुर्ख्यौली घरजग्गाबाट उठिबास लगाउने जुन प्रवृत्ति जारी छ, सायमि त्यसको विरोधमा उपत्यकाभरि दौडधूप गर्छन्। हरिसिद्धिमा डोजर चल्दा हरिसिद्धि पुग्छन्, खोकनाको मुद्दा उठे खोकनातिरै लम्किन्छन्।
उनले काठमाडौं उपत्यकाभरि विस्तार गर्ने उद्देश्यले सडक विस्तार पीडितहरूको संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। अहिले यो समिति त्रिपुरेश्वर, कलंकी, थेँचो, हरिसिद्धि, थली, साँखु, सुन्दरीजल लगायत ३२ ठाउँमा विस्तार भएको छ।
गैरन्यायिक सडक विस्तारविरूद्ध आवाज उठाउने गरेकाले उनी पटकपटक जेल परेका छन्। गत वर्ष उनी बालाजुका सडक विस्तार पीडितहरूको हकका लागि संघर्ष गर्दा एक साता जेल परेका थिए। उनको रिहाइका लागि काठमाडौंमा आन्दोलन नै भयो।
त्यस बेला हामीले 'हिरासतबाट छुटेर सुमन सायमिले छोरीहरूलाई अँगाल्दै भने– राम्रो काममा हतकडी लगाएको, डराउनुपर्दैन' भन्ने स्टोरी गरेका थियौं।
सायमिले भूमिसँगै भाषिक आन्दोलन र गुठी आन्दोलनमा पनि आवाज उठाउँदै आएका छन्। योपटकको चुनावमा उठेपछि आफूलाई राजनीतिप्रति पनि झुकाव बढेको उनी बताउँछन्।
'दस वर्षअघि म व्यापार गर्थेँ। पछि समय–परिस्थितिले मलाई अभियन्ता बनायो। अब राजनीतिमा लागेर सडक र सदन तताउने हो,' उनले भने, 'आमनागरिकका मुद्दाहरू लिएर जाँदा धेरैपटक माथिको आदेश भनेर सुन्नुपरेकाले पनि मलाई आन्दोलन गरेर मात्र नपुग्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ।'
यसपालि स्थानीय चुनावमा सायमि आफ्नै चासोले उठेका होइनन्। उनलाई यहाँका गुठी र नेवाः समुदायले पहल गरेर उठ्न अग्रसर गरे। उठ्ने–नउठ्ने अलमलबीच १२ दिनअघि मात्र उनले उम्मेदवारी दर्ता गराए। त्यही भएर प्रचारप्रसारका लागि धेरै समय पाएनन्। जति समयमा प्रचार गरे, आफूले चिनेजानेको आफ्नै क्षेत्रमा गरे। जति मत पाए, त्यहीँबाट पाए। भित्री बस्ती बाहिरका मान्छेले उनी चुनावमा मेयर उठेको-नउठेको पनि पत्तै पाएनन्।
'अलि अगाडिबाट प्रचार गर्न पाएको भए अझ बढी मत आउने रहेछ,' उनले भने, 'कतिले सुमन सायमि भन्ने मान्छेले आफूलाई लुकाएर राखेको रहेछ, बल्ल चिन्यौं पनि भन्नुभयो। त्यसले चुनावमा नजिते पनि हौसला दियो।'
उनले अगाडि भने, 'म एकोहोरो आफ्नो काम गर्छु, त्यति धेरै आफ्नो प्रचार गर्दिनँ। काम गरेपछि त्यसको मूल्यांकन आफैं हुन्छ भन्ने सोचेर हिँडेको मान्छे हुँ। तर राजनीतिमा त्यस्तो नहुने रहेछ। यहाँ त बोल्नेकै पीठो बिक्ने रहेछ।'
जे होस्, यो चुनावले सायमिलाई राजनीति नजिकबाट बुझ्ने मौका दियो। यसले पछि अर्को चुनाव उठ्न सजिलो हुने उनले बताए। अब उनी आफ्नो संगठन विस्तार गरेर संसदीय चुनावका लागि तयारी गरिरहेका छन्। यहाँको व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि राजनीतिमा आउनुपर्ने आवश्यकता उनले देखेका छन्।
आफूलाई यो चुनावमा आँखीझ्याल चिह्नले चिनाएकाले उनले त्यसलाई नै आफ्नो चिह्न बनाउने सोचेका छन्। दलका लागि नाम पनि सोचिरहेको उनले बताए।
नयाँ मेयर बालेन शाहसँग मिलेर काम गर्नसक्ने संकेत पनि उनले दिए।
भने, 'बालेनले तपाईंलाई अगाडि राखेर मिलेर काम गर्ने हो भनेका छन्। दाजुभाइ मिलेर उपत्यका बनाउन–बचाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने? अहिलेसम्म हाम्रो मौखिक मात्र कुरा भएको छ। पछि भेट्छु भनेका छन्।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १३, २०७९, २३:५२:००